Tonga eto ny mpandrindra ny hetsika SUN : nohavaozina ny toby PNNC /Seecaline Lohanosy | NewsMada
Tonga eto ny mpandrindra ny hetsika SUN : nohavaozina ny toby PNNC /Seecaline Lohanosy
Nijery ifotony ny zava-misy eny amin’ny toby PNNC/ Seecaline avy hatrany ny mpandrindra ny hetsika SUN iraisam-pirenena raha vao nigadona eto Madagasikara.
Tonga eto Madagasikara, omaly, ny mpandrindra ny hetsika maneran-tany Scaling Up Nutrition (SUN) ahitana ny vovonana miady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo, Gerda Verburg. Nidiny teny ifotony avy hatrany izy nitsidika ny toby PNNC/Seecaline Lohanosy, ao amin’ny kaominina Antanetikely Ambohijoky, distrika Atsimondrano, omaly hariva. Nohavaozin’ny Unicef io toby io ary nohatsaraina tanteraka ny fotodrafitrasa, nampiana fitaovana fahazoan-drano madio sy toeram-pivoahana manaraka ny fenitra. Niforona ny taona 1999 ny toby ary indroa isan-kerinandro ihany no misokatra mandray ny zaza sy ny reny. Mandray isaky ny talata sy ny zoma ny toby miaraka amin’ny mpanentana momba ny fanjarian-tsakafo tokana, Raholiharimalala Marie Josiane.
Manomboka izao, hisokatra isan’andro ny toby ary handray ny zaza herintaona ka hatramin’ny telo taona hotezaina amin’ny akany efa voaomana amin’izany. Nitombo roa koa ny mpiasa hampihodina ny toby sy ny akanin-jaza. Mandanja, mandrefy ny sandrin’ny zaza, manao dinidinika ara-pahasalamana, mampianatra mahandro ny reny ny asa iandraiketan’ny toby. 104 ny zaza latsaky ny roa taona ary 118 ny 2 taona -5 taona karakarain’ny toby. « Manodidina ny 45% ny tahan’ny tsy fanjarian-tsakafo mitarazoka eo amin’ny zaza vao teraka ka hatramin’ny 2 taona », hoy ny mpanentana nandritra ny volana avrily lasa teo.
Ho fandraisana an-tanana, mivarotra zaza tomady ny toby homena ny zaza tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo, ampianarina manomana sakafo ara-pahasalamana amin’ny vokatra misy eo an-toerana ny reny. Mamokatra vary, mangahazo, legioma sy anana ny mponina, indrindra ireo manana tany ahazoana manao izany.
« Nisy zaza roa tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika sy sarotra, ny volana febroary lasa teo ary nalefa teny amin’ny hopitaly mihitsy. Efa mivoatra tsikelikely ny lanjany amin’izao fotoana izao », hoy ny mpanentana satria manohy milanja eny amin’ny toby izy. Miorina eny amin’ny 2 km miala amin’ny toby ny CSB II Antanetikely ho an’ny zaza voatily fa tratran’ny tsy fanjarian-tsakafo mahery vaika sy sarotra. Misahana fokontany efatra ny toby.
Miahy ny toby 33 miasa eny amin’ny distrika Atsimondrano ny ONG Andry fanofanana tantsaha (AFT). Miara-miasa amin’ny mpanentana momba ny fanjarian-tsakafo izy ireo ary manara-maso ny asa eny ifotony ihany koa, hoy ny filohan’ny ONG, Ranomenjanahary Violette. « Ny olana, mamboly sy miompy ny mponina ety, saingy avadika ho vola avokoa izany fa tsy ataony sakafo », hoy ny fanazavany. Ny rano koa mbola manahirana ny vahoaka satria vovo no ampiasain’ny ankamaroany. Amin’ny mponina 2 477 amin’ny tokantrano 380, 212 izao manana rano manokana ao an-trano.
Hihaona amin’ny filoha sy ny praiminisitra ny tenany
Mbola hihaona amin’ny tomponandraikitra maro eto amintsika ny mpandrindra ny hetsika SUN, anio tontolo andro. Hizara ny vokatry ny fihaonana izy anio hariva.
Niditra ho mpikambana ao amin’ny hetsika SUN i Madagasikara, ny taona 2012, izay hivondronan’ny vovonana dimy misahana ny ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo ; vovonan’ny fiarahamonim-pirenena Hina, vovonan’ny mpikaroka, ny governemanta, ny sehatra tsy miankina sy ny vovonan’ny firenena mikambana. Foibe mandrindra ny asan’ny hetsika SUN Foibem-pirenena misahana ny fanjarian-tsakafo (ONN).